Ny karatra fividianana Apple Card dia tsy manam-paharoa | Famoronana an-tserasera
Apple Card dia nambaran'ny Apple iray andro lasa izay ary namela antsika ho voatonona tamin'ny hatsaran'ny endrik'ilay karatra io. Ny zavatra rehetra mifamatotra amin'ny marika amerikana dia hita ao anatin'io karatra minimalista misy endrika tsara sy manokana io.
Noho ny famolavolana ampiasaina fotsiny dia saika mahatonga anao maniry ny hividy iray. Ary izany dia ny ekipa mpamorona ao ambadik'i Apple Nahavita asa lehibe tamin'ny fanairana antsika izy. Karatra izay ankoatry ny maha trosa nomerika ho an'ny iPhone dia ho hita ihany koa ho vokatra "azo tsapain-tanana".
Rehefa zatra ireo carte de crédit plastika miaraka amina kaody fiarovana azy ireo izahay, ny isa izay amantarana azy sy ny sonia, karatra titanium, miaraka amin'ny sonia banga sy ny anaran'ny tompony amin'ny laser, hamafiso izay Apple nandritra ny taona vitsivitsy izao.
Izahay koa manana ny sary famantarana Apple eo amin'ny karatra ary izany microchip izay misy ny antsipiriany rehetra ilaina handoavana vola. Amin'ny lafiny iray dia manana ny anaran'ny mpiara-miasa amin'i Apple amin'ity tetikasa ity izahay: Goldman Sachs sy Mastercard; izay manondro, ny faharoa, manondro amin'ny fanavaozana samihafa hanolorana traikefa vaovao.
Saika afaka milaza isika fa ny carte de crédit tsara tarehy lehibe kokoa amin'ny fanamboarana azy. Ary azo antoka fa afaka milaza isika fa hahita ireo anarana lehibe amin'ny serivisy amin'ny banky maka tahaka an'io tolo-kevitra lehibe io amin'ny endrik'i Apple.
Karatra iray izay ampiarahina amin'ny Apple Pay no ahafahan'ny mpampiasa mitantana ny azy ireo kaonty mivantana avy amin'ny iPhone. Manararaotra ihany koa ny fianarana milina amin'ny kaody fandokoana arakaraka ny sokajy sy ny toerana fampiasana.
Mazava ho azy, amin'izao fotoana izao ny Tsy ho any Etazonia ihany no misy ny Apple Card amin'ity fahavaratra ity, nefa tsy tena fantatra hoe rahoviana no hahatratra ny ambin'izao tontolo izao. Fahombiazana mahomby amin'ny famolavolana carte de crédit tsy manam-paharoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny endrika tsy manam-paharoa an'ny Apple Card
Zipi sy Zape dia niverina tamin'ny fahatairan'ny rehetra
Tadiavo ny asanao lavitra manaraka ho mpamorona amin'ny remotehub